Etat RN 7 Tanà Tuléar
Par: tiana be
Date: 17 janvier 2018 - 11:55
Mikasa ny hanao sur route tanà ho any Tuléar, mba manao ahoana zao ny état ny lalana. Renault kangoo ny fiara!
Misaotra ny mpisahatra
Re: Etat RN 7 Tanà Tuléar
Date: 18 janvier 2018 - 09:32
Mba manontany re!
Date: 18 janvier 2018 - 09:47
tsara be e, vita indray andro raha kangoo izany ka matanjaka ny chauffeur sy ny hoentina
Date: 18 janvier 2018 - 09:51
mahazaka dahalo 10 lahy v lony zany kongorou zany ????
Date: 19 janvier 2018 - 07:02
Date: 19 janvier 2018 - 07:56
vao afaka an'i Ambalavao ianao dia ohatran'ny efa tonga sahady satria mahitsibe ny lalana manomboka eo